Yintoni endimele ndiyazi ukuba ndiqhube i-website yam isayithi ngeenkonzo ze-SEO?
Injini yokukhangela yeGoogle iyaziwa ukusebenzisa izinto ezingaphezu kwama-200 ezahlukileyo kunye ne-algorithm yesimo esinobuchule. Njengoko kungakaze kuvezwe, ingqiqo yethu nolwazi lwethu lusekelwe ngokusisiseko kumava oshishino. Nangona kunjalo, ininzi ye-webmasters ehamba phambili, kunye neenjensi eziphezulu zedijithali zijolise kwiimeko ezincinci ezahlukeneyo zokubonelela ngeenkonzo ze-SEO, kwinqanaba elikhulu kunye nobunzima - logiciel de bulletin de paie.
Ewe, sibona ukuba akuwona onke amanqanaba afanayo anamandla alinganayo, ngoko ke impembelelo yabo kwi-algorithm ye-Google yokusesha iyahluke. Ngoko, ngenhlanhla akudingeki sicinge ukuba isicwangciso esikhulu sezinto ezingaphezu kwamakhulu amabini. Endaweni yoko, makhe sibone iimpawu ezibalulekileyo kufuneka sizikhathalele malunga nokuqala. Kwaye akukho nto eyahlukileyo, nokuba unqwenela ukusebenza kwi-injini yokucwangcisa injini ngokwakho, okanye mhlawumbi unqume ukuqhubelela iwebsite yakho ngeenkonzo ze-SEO ezinikezelwa yi-arhente-unokungazi kakuhle zonke ngezi zinto ezintathu ngaphambi kokuba nantoni na enye:
Umgangatho wokuqukethwe ubonakala uyona nto ibaluleke kakhulu xa kufakwe i-algorithm ye-Google kwisigqibo sokwenza uphando kwiwebhu nganye kwiwebhu.Yaye ngoku kutshanje kwaphinde kwaqinisekiswa kwakhona, ngeli xesha ngabanye abasebenzi basebenzayo bebasebenzi beli shishini. Ngoko, sinokulibala malunga nezo zihlandlo (malunga neminyaka emibini edlulileyo), xa ingqwalaselo ephambili yayiye yafudukela kwimiqulu ebhaliweyo yomatshini oyintloko.Ngoku kubaluleka kokubaluleka komxholo osemgangathweni kulwimi lwendalo kuyabuya! Ngoko, kufuneka ugxininise umsebenzi wakho ekwakheni umxholo oxabisekileyo, onomsebenzisi-onomdla, ocebile nge-infographics, iividiyo, kunye nemifanekiso emininzi, kunokuba ugcine ukugcina i-key words word.
I-Quality Link Link
Ukuba neelunkile ezaneleyo zokuxhuma iwebhusayithi yakho kunye namanye amanqaku ewebhu afanelekileyo kunokwenzeka ukuba yisoloko isisombululo sesibini esomeleleyo seGoogle. Into emele uyenze ukuyiqwalasela ngoku ngoku kukuba i-Google's algorithms ayinakuyeka ukuphucula nokuphuhlisa. Kwaye kufuneka sijamelane nayo - ngoku i-injini yosesho "iyazi" indlela yokwenza umehluko phakathi kwezilwanyana zendalo (organic), kunye nezixhobo ezisetyenziswa ngokubanzi ukuphumeza amanqaku aphezulu. Ngale ndlela, ndiyakuncoma ukuba uyilibale malunga nayiphi na ikhonkco ezihlawulwayo ngobuninzi, okanye nayiphi enye i-hat-hat, kwakunye neendlela zokuqhagamshela i-gray-hat. Kungcono ukuba ube nomlinganiselo ophantsi weekhonkco eziphezulu kuphela, kunokuba ungene kwezinye izinto, ngaphandle kwengozi yakho yokuhlawulwa.
Kuqala kubonwa ngasekupheleni kuka-2016, ngoku iGoogle ishintshile ngokupheleleyo kwindlela enye yokubonisa. Ndiyathetha ukuba ukusebenzisa i-website yakho esekelwe kwideskithophu exhaswe ngenguqu ephathekayo yeselula, ayizange ibe yinto enengqiqo. Enyanisweni, ukuphumeza udidi oluphezulu kwiluhlu lwe-Google lwe-SERPs, kuya kufuneka usebenze ekusebenziseni ukuhamba kwezinto eziphathekayo, phantsi kweyiphi na imeko. Inyaniso enye nje ebandayo-ngokutsho kwephononongo olutshanje, iindawo ezibonakalayo ezifunyenweyo kwiziphumo zophando eziphezulu-100 zanikezwa yi-Google ngokukodwa ngokusebenzisa isisombululo esiphendula siselula sokukwakha amaphepha abo ewebhu. Ngoko, ngoku ukuphendula ngokuphathekayo kubalulekile ngoku, ngoko ke cinga ukwenza izinto ngokukhawuleza kunokwenzeka, ngokuhambelana nokugcina ukukhula kwakho kwangoku kwi-SEO iinkonzo. Oko kuya kuba yiyo yonke into oyifunayo, ubuncinane ngoku.